नापीका हाकिम लुसुक्क कता ? - ebudhabar.com - Different taste of news, views & analysis.
काठमाडौं । आफ्नो हाकिमको महिलासँगको सम्बन्धबारे नापी विभागको क्यान्टिनमा आजभोलि बाक्लै चर्चा हुने गरेको छ । युवतीप्रेमी महानिर्देशक गणेशराज भट्ट इभिनिङ वाक भन्दै हरेक साँझ नापीकै महिला कर्मचारीको डेरामा पुग्ने गरेको प्रसंग कसैले सुनाउँदा पनि कर्मचारीहरूले त्यसलाई आश्चर्यका रूपमा भन्दा पनि स्वाभाविक रूपमा लिने गरेका छन् ।
नापीकै प्रांगणमा सुनाइएको कथनअनुसार महानिर्देशक भट्टको घर इमाडोलको बोझेपोखरीमा छ । उनी हरेक बेलुकी क्याप लगाएर इभिनिङ वाकमा निस्किन्छन् । १५ मिनेट टाढा एउटा घरमा १५ मिनेटजति आराम गर्छन् । त्यो घरमा नापी कार्यालय ललितपुरमा करारमा कार्यरत एक महिला कर्मचारी डेरा बस्छिन् ।
त्यति मात्र होइन, उनी खरदारभन्दा तल्लो तहका महिला अमिनका अगाडिसमेत लुत्रुक्क पर्ने गरेका छन् । उनलाई भर्खर अमिन पास गरेका केटीहरूले पनि उनकै कार्यकक्षमा थर्काउने गरेका छन् । केही दिनअघि प्रमुख नापी अधिकृतहरूकै अगाडि भट्टकै कार्यकक्षमा एक महिला अमिनले उपरखुट्टी लगाउँदै मलाई कसले सरुवा गर्दो रहेछ हेरौंला भन्दै भट्टलाई त्यहीँ हप्काइन् । तर, डीजी ङिच्च हाँसेरै बसे । उनको यो हविगत देखेर प्रमुख नापी अधिकृतहरू पनि लाजले पानीपानी भएका थिए ।